Vaovao - Karazan-mixer shower
Misy fahasamihafana lehibe eo a fandroana fandroana miaraka amin'ny fampisehoana tsara sy ny fantsona fandroana tsy dia misy fampisehoana. Ho an'ny faucet mandro misy fampisehoana tsara dia tena tsara ny vokany fitsitsiana rano, ary na dia velomina 10000 heny aza izy io dia tsy hivoaka, izay afaka mamonjy rano be. Ka tsara kokoa ny misafidy ny faucet mandro amin'ny teknolojia avo lenta.
Manala ny fandroana dia manana fahatakarana henjana ireo singa samihafa ao aminy isika. Na inona na inona ampahany dia ampahany manan-danja amin'nyfandroana, izy io dia mitana andraikitra tsy azo soloina amin'ny asan'ny isan'andro fandroana. Ny fiasa lehibe indrindra sy tena ilaina amin'ny fandroana dia fehezin'ny vatan'ny faucet.Ny fandroana iraisana ao amin'ny fianakaviana mazàna dia manana fomba fivoahan'ny rano isan-karazany. Raha tsy misy ny fifehezana ny vatan'ny faucet dia tsy azo atao ny mahatsapa ny fivoahan'ny rano ary manova ny fomba fivoahan'ny rano samihafa. Tena ilaina ny misafidy vatana mitarika misy fitaovana matanjaka sy haitao avo lenta.
Fitaovana fandroana cartridge tsy mitovy, hafa ny fiasa, misy karazana faucet telo cartridge eny an-tsena dia valizy valizy kapila vita amin'ny seramika izy ireo, valizy vy tsy misy fangarony ary vovo-bozaka karazana varika, eo anelanelan'ny vidin'ny valizy kapila vita amin'ny seramika, kely dia kely ny fandotoana, saingy mora vaky; valizy baolina vy tsy misy fangarony, miaraka amin'ny atin'ny haitao avo lenta, afaka mifehy tsara ny mari-pana amin'ny rano, afaka mamonjy angovo sy rano; Roll type spool, mora ampiasaina, indrindra ny fihodinan'ny malama, nefa koa manana ny mampiavaka ny fahanterana sy ny fanoherana.
Ny mari-pana tsy miova mandeha ho azy fandroana’s ny valizy mifangaro dia misy fiasan'ny maripanan'ny rano tsy tapaka. Aorian'ny fametrahana ny mari-pana amin'ny rano fivoahana mifanaraka amin'ny tena filàna, ny mari-pana amin'ny rano mivoaka dia mety hahatratra haingana sy tsy tapaka, izay tsy voakasiky ny fiovan'ny tsindry fidiran'ny rano mangatsiaka sy mafana, ny mari-pana na ny fikorianan'ny rano fivoahana, mba hamahana ny olan'ny hatsiaka tampoka sy ny hafanan'ny rano mafana amin'ny fizotran'ny fandroana. Rehefa miova ny tsindry fidirana, ny mari-pana na ny fivoahan'ny rano mangatsiaka sy mafana, dia ao anatiny ny fiovan'ny mari-pana± 2 ℃.Ankoatr'izay, ny valizy mifangaro amin'ny rano mafana dia manana ny fisorohana ny fikororohana ny hatsiaka sy ny hatsiaka. Amin'ny fizotran'ny fandroana, rehefa tapaka tampoka ny rano mangatsiaka, ny valizy mifangaro amin'ny rano mafana indrindra dia afaka manidy avy hatrany ny rano mafana ao anatin'ny segondra vitsy, izay miaro ny fiarovana amin'ny fanoherana ny volo; rehefa tapaka tampoka ny rano mafana dia afaka manidy ny rano mangatsiaka ao anatin'ny segondra vitsy ny valizy mifangaro amin'ny rano maharitra amin'ny hafanana.
Misafidiana tsara loha loha, no fiandohan'ny fandroana tsara tarehy, mifidiana tena mety amin'ny lohan'izy ireo manokana sy avo lenta.